ezingekho Plain ephothiweyo ipholiyesta iikhaphethi mboniso kwiimethi zegumbi yokuhlala - China Huizhou Jinhaocheng
iikhaphethi Plain non ephothiweyo ipholiyesta mboniso kwiimethi for kwigumbi lokuhlala
12000 kg / kg Usuku nganye
iikhaphethi Plain non ephothiweyo ipholiyesta mboniso kwiimethi for kwigumbi lokuhlala.
Yenaliti ngenqindi Non womluki.
iimveliso zethu ezisetyenziswa kakhulu kuzo zonke iinkalo yoluntu namhlanje abanjalo njengoko ingubo yombane, ingubo, elingaphakathi imoto, iingxowa, imaski, iminqwazi, iimpahla, shoecover, elibala, ilaphu, impahla, ifanitshala, oomatrasi, izinto zokudlala, izinto zokunxiba, filter ilaphu, ngokuzalisa, ezolimo, textile ekhaya, ingubo, kushishino, interlining kunye namanye amashishini.
2. Home elukilweyo: Table ngelaphu, ilaphu ezilahlwayo, pholstery ifanitshala, inshorensi umqamelo & isofa, intwasahlobo epokothweni, umatrasi kunye Quilt, isiciko uthuli , ibhokisi yokugcina, ngubo, slippers ehotele ngexesha elinye-, isipho ukupakisha, udonga iphepha, njl
4. Medical / zotyando: Surgery ngelaphu, umsebenzi iilokhwe kunye ikepusi, imaski, inshorensi zezihlangu , njl.
5. Ezolimo: iimveliso UV ziphathwe ezisetyenziswa kwezolimo, ibhegi izityalo, hlala inshorensi efudumeleyo iziqhamo, izityalo
Landa njenge PDF
Zangaphakathi okanye ngaphandle ikhaphethi plain polyest nonwoven ...
Inaliti ngamanqindi ukhuseleko nonwoven eshicilelweyo ngayo ...
Ikhaphethi 0.5-15 mm needlepoint ekhaya non-ephothiweyo
Ihotele style kwekhaphethi siko nonwoven plain p ...